मोबाइलको पासवर्ड वा प्याटर्न बिर्सिनुभयो ? यसो गर्नुहोस् - Khabarshala मोबाइलको पासवर्ड वा प्याटर्न बिर्सिनुभयो ? यसो गर्नुहोस् - Khabarshala
सबैभन्दा पहिला आफूले अनलक गर्न चाहेको फोनको स्विच अफ गर्नुहोस् । बन्द भएपछि कम्तिमा एक मिनेटसम्म पर्खिनुहोस् । अब भोलुम डाउन बटन, पावर अन बटनलाई एकसाथ दबाउनुहोस् । (कुन कुन बटन दबाउने भन्ने तरिका कम्पनीअनुसार केही फरक हुनसक्छ)
फेरी एक मिनेटसम्म पर्खिनुहोस् र आफ्नो एन्ड्रोइड मोबाइल अन गर्नुहोस् । यतिगरेसँगै तपाईंको फोन अनलक हुनेछ ।
अब त्यसमा फर्गेट पासवर्ड विकल्प देख्न सक्नुहुनेछ । त्यसमा आफ्नो जिमेल आईडी र पासवर्ड राख्नुहोस्, जुन तपाईंको डिभाइसमा प्रयोग भइरहेको छ । यति गरिसकेपछि तपाईंको फोन अनलक हुनेछ र नयाँ प्याटर्न राख्न सक्नुहुनेछ । टेकपानाबाट